Email Rondedzero Kuchenesa uye Hutsanana Services: Nei Uchifanira Imwe uye Maitiro Ekusarudza | Martech Zone
Email Kero Rondedzero Kuchenesa: Nei Uchifanira Email Hutsanana Uye Sei Sarudza Sevhisi
NeChishanu, Kurume 5, 2021 Chipiri, April 27, 2021 Douglas Karr
Email kushambadzira mutambo weropa. Mumakore makumi maviri apfuura, chinhu choga chakashandurwa neemail ndicho chakanaka vanotumira email vanoramba vachirangwa zvakanyanya nevazhinji vanopa email. Nepo ISPs uye ESPs vaigona kuumbiridza zvachose kana vachida, ivo havangodaro. Mhedzisiro yacho ndeyekuti kune hukama hwekupokana pakati pezviviri. Internet Service Provider (ISPs) block Email Service Provider (ESPs)… uyezve maESP anomanikidzwa kuvhara vatengi.
Kana pamusoro pegumi muzana emaemail ako akaipa, asingasviki 10% anunurwa!
Izvo hazvisi nyore sekukwirisa-kupinda muindasitiri. Masayiti senge edu anoshanda nevadyidzana pamisangano yakagovaniswa nevatengesi nevatengi. Isu hativape mukana kune yedu runyorwa, asi kazhinji tinounganidza email kero pamwechete kuti tiite mishandirapamwe pa. Icho chave chiri chikuru musoro. Vatapi vebasa reemail havana basa nemaitiro ako e optin kana nzira yako yekuongorora. vanongofungidzira kuti uri spammer.
ESPs seMailChimp vakashandisa ungwaru pa email kero mune system inonzi Omnivore. NaOmnivore, Mailchimp yakatumira yambiro zviuru makumi mashanu ndokuvhara maakaunzi makumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu anegumi mugore rimwe chete. Vanogona kusimudzira chokwadi chekuti maakaunzi aya aive akaipa ... ndingati vazhinji vavo aingova makambani anotumira kune avo zvinyorwa uye vasingashandise maitiro akanaka.
Maererano neJupiter Research, zvinopfuura makumi maviri muzana zvekunyoreswa kweemail zvine typos, syntax, domain uye zvimwe zvikanganiso. Kuita chimwe chinhu chakareruka sekutumira kune yekare runyorwa uko chimwe chikumbaridzo cheemaimeri adhiresi mabhureki anogona kudzika chikumbaridzo chavo. Izvo hazvina kushata. Pasina kutaura bots kunze uko kusundidzira SPAM kuteya email kero kuburikidza nesisitimu zuva rega rega kuyedza nekukubata iwe. Izvo zvinosetsa, mumaonero angu, ndezvekuti ndinotenda zviri nyore kuti SPAMMER iwane email mubhokisi rako rekunyora pane avhareji kambani inotumira meseji chaiyo.
Email Vashandi veVanopa havana kunyatsovimbika nezve yavo yekuburitsa mwero, chero. Kazhinji, ivo vanozo tout a 99% kuburitswa chiyero, asi chidiki chidiki chinotaura kuti zviri mushure memamwe maemail anotumira. Zvakanaka, duh… wekutanga anotumira kubata asiri eemail kero! Ivhareji yekugamuchirwa mwero we Sender Chikamu ye91 kana kupfuura ndeye 88%. Kuve ne1% yeako runyorwa zvakashata kunogona kudonhedza kununurwa kwako neinopfuura 10%!
Ndinofara, zviripo email sosi uye rondedzero yevanopa hutsanana pamusika uyo anounganidza ungwaru uye achakubatsira kuchenesa zvinyorwa zvako usati wabatwa mune ino nyonganiso. Ramba uchifunga kuti pane musiyano mukuru pakati pe email yekusimbisa maringe neemaimeri yekuongorora masevhisi. Kutumirwa neemail kunosimbisa kuti kero yeemail yakavakwa nemazvo, nepo sosi yeimeri ichishandisa nzira dzekufungidzira mukana wayo wekuendeswa.
Sei Uchifanira Email Rondedzero Kucheneswa?
Email utsanana inhanho inodiwa pakuve neyakakura email kuburitsa chirongwa uye kuchengetedza yakanaka mutumidzi mukurumbira. Heano mamiriro mana apo email rondedzero yekuchenesa chiri chinodiwa:
Kutama - Kana iwe uri kuenda kune mutsva mupi, email rondedzero yekuchenesa idanho rakakosha mune yako IP yekudziya zano.
Yakadzika Inbox Kuiswa - Maemail ako anogona kunge achienda akananga kune junk folda nekuti runyorwa rwako rwune misungo yakawanda ye spam uye rakadhonzera kero dzeemairi pairi.
Yakaderera Vhura Mitengo - Kana usiri kuyera yako inbox yekuisa mwero uye uine yakaderera yakavhurika mitengo, ako maemail anogona kunge achienda kune zvisingavaki folda nekuda kwemazhinji spam misungo uye bounced email kero.
Re-Engagement - Kana iwe uine runyorwa iwe rwausina kutumira kwauri mumwedzi, iwe uchazoda kuchenesa rondedzero kuti udzivise spike muma bounces anogona kukanganisa ako ekuendesa mareti.
Nzira Yokusarudza Nayo Email Chinyorwa Kuchenesa Service
Iri peji rave rakakurumbira mukurumbira, saka tinoda kuona kuti tinopa nhungamiro mukusarudza mupi uye kuti sei takagovanisa runyorwa pazasi mumazita eemail ekurumbidza uye asingazivikanwe. Kurudziro yedu yaive yakavakirwa pane zvinotevera:
Terms - sevhisi ine mazwi uye nemutemo wepachivande munzvimbo inovimbisa kuti havazotengesazve kana kusunungura maemail email kune chero wechitatu bato?
Transparency - sevhisi yakanyoreswa zviri pachena pamhepo neruzivo rwehukama kune yavo domaini nzvimbo, bhizinesi nzvimbo, uye ruzivo rwekuonana Bhizinesi iri rakatsaurwa hofisi nzvimbo (uye kwete PO Bhokisi kana hofisi yakagovaniswa)?
tsigira - kungave kana kwete iyo kambani yanga iine nzira yekutaurirana navo kuburikidza neemail, fomu rekubatana, kana nhamba yefoni uye pane chero munhu akanyatsopindura chikumbiro.
Kubatanidzwa - kuwanda kugadziriswa kwemaemail kero chinhu chimwe, asi kana iwe uchigona kusanganisa ese masisitimu ako uye nzvimbo dzekupinda mauri kutora maemail kero, ndiyo nzira inoshanda zvakanyanya.
API - vane API yakanyorwa-zvakanaka paunogona kusanganisa mapuratifomu ako zvakananga navo?
kutevedzera - kungave kana kwete iyo kambani inogara munyika ine zvakavanzika mitemo senge GDPR kana email spam kutevedzera mutemo.
Yedu Email Chinyorwa Kuchenesa Sponsor:
Kuongorora kweemail, kuongorora uye rondedzero yekuchenesa yakagadzirirwa vanhu vanoda chishandiso chinokurumidza uye chakavimbika pasina kupokana nekukwiridzira Ingori matanho matatu akareruka ekuwedzera yako runyorwa
Yakavimbiswa 98% + chiyero chekuendesa nerunyorwa rwako rwemaimeri rwakasimbiswa.
Sarudzo dzekurodha pasi zvinyorwa zvako zvitsva nemishumo yakakosha.
24 / 7 keriya nevanhu chaivo kune rimwe divi kuti vabatsire.
Isa yako Email Chinyorwa
Inotungamira Email Rondedzero Kuchenesa uye Hutsanana Vanopa
Heano anotungamira e-mail ongororo uye rondedzero yehutsanana masevhisi. Zvese izvi zvinosanganisira yepamhepo chikuva uko iwe zvausingade kuti utore timu yekutengesa uye vese vane mazwi ekushandisa data, ari pachena, uye anoshingairira kupindura kutsigira zvikumbiro:
Kushandiswa kweaya marondedzero ehutsanana masevhisi anogona kunatsiridza huwandu hweemail izvo zvinoumba kuinbox, deredza njodzi yako yekuvharirwa neInternet Service Provider, uye kuderedza njodzi yekudzingwa neMupi Wako Webasa Provider ... ivo vanokodzera iyo inishuwarenzi kana iwe uine rekare runyorwa kana uri kubatana pane imwe. Ramba uchifunga kuti haumbofi wakasvika zana muzana pazvinyorwa zvako. Vanhu vanochinja mabasa uye vanopa kazhinji, vachisiya avo ekare maemail kero.
Mazhinji evanopa aya anopawo iyo API kuitira kuti iwe ugone kuzvibatanidza muitiro wako wekutora.
Aeroleads - tsvaga maemail ebhizinesi uye nhamba dzenhare dzevanotarisira. Ivo vane chrome yekuwedzera zvakare.
BriteVandudza - (izvozvi chikamu cheUchokwadi) zvishandiso zvaunoda kubvisa zvisiri izvo maemail kubva kune ako vatengi dhatabhesi, email kushambadzira mishandirapamwe, kana epamhepo matsamba enhau uye chengeta iwo kunze kwekunaka. Unogona kudhonza nekudonhedza faira zviri nyore, ugovana iyo faira kuburikidza negore, uye uwane ruzivo rwakadzama pane yako runyorwa usati wambobata kambani. Ivo zvakare vane API kana iwe uchida kusanganisa yako email yekuongorora pamwe navo!
Kubvisa - Iyi email email verifier inoita kuti iwe ugone kuisa iyo database yeemail uye kuchenesa yako email runyorwa nekungodzvanya kamwe chete.
DeBounce - DeBounce sevhisi inokutendera iwe kurodha uye kusimbisa runyorwa rweemail kero nekukurumidza uye nenzira yakachengeteka.
Email Checker - Inozivisa manyepo kana asiri eemail kero iwe.
Email Checker - ((zvakasiyana nepamusoro) Email Checker ndeimwe yemapiyona ekutanga mukati meiyo email yekuongorora chikamu, zvichibatsira kusimudzira kufambiswa kweemail kutaurirana.
Experian Dhata Yemhando - mhinduro yekusimbisa yeemail iyo inozivisa ipapo ipapo kana kero yeemail iri kushanda uye inogona kuunzwa.
FreshAddress inobatsira makambani anoenderana neemail kutyaira mari nekuvaka, kugadzirisa, kupatsanura, uye kuchenesa zvinyorwa zvavo zveemail.
Zvisinganzwisisike's data intelligence platform inotarisana nemitemo inotungamirirwa nemitemo uye chaiyo-nguva yekuongorora maitiro anoshandisa nzira yakasiyana-siyana yekucherechedza, kusimbisa, uye kudzivirira kune zvakasiyana-siyana zvekutyisidzira kwe-email.
kombiyuta - Kurumidza uye nekushingirira ongorora nekusimbisa maemail adhi uye madomeni kuti uve nechokwadi chekwake usati washandisa zvisina basa nguva, simba, nemari, uchiwedzera kutumira kwako meseji ne90%.
Kickbox - Kickbox inovimbisa kuti iwe unongotumira maemail kune vashandisi chaivo uye zvinokubatsira kupatsanura yakaderera-kero kero kubva kune-yepamusoro-kukosha mazita. Chengetedza mukurumbira wako, wedzera mitengo yakavhurika, uye chengetedza mari neKickbox.
MailerCheck - Kutumirwa neemail, kuongorora, uye rondedzero yekuchenesa yakagadzirirwa vanhu vanoda chishandiso chinokurumidza uye chakavimbika pasina kupokana nekukwiridzira. Ingori matanho matatu akareruka ekuwedzera yako runyorwa
MiriyoniVerifier - Kutumirwa neemail nekuvimbiswa kwakanyanya uye nemitengo inodhura.
NeverBounce inobvisa adhiresi dzemaimeri dzisinga tsanangurike uye inoderedza zvakanyanya huwandu hwese hwebhureji hweyekupedzisira kununurwa
Proofy - Kurumidza kusimbisa uye ongorora yako email zvinyorwa. EU-US Yakavanzika Shield inoenderana.
TheChecker - Zviuru zvevashandi vanobva kunyika makumi masere kana makumi masere vanovimba nekutenderera kwedu kweemail yakawanda uye nemameseji erondedzero yekuchenesa
TowerData - Wedzera yako inbox yekuendesa rate nekuchenesa yako email runyorwa rweasina basa uye hunyengeri email kero.
Xverify - Ziva urikutumira email account iyo isingazonetseke. Xverify inogona kuongorora email kero mune chaiyo-nguva uye kuburikidza nebatch.
Webbula - Email utsanana uye data kusimudzira masevhisi.
Mamwe maEimeri Verification Services Pamhepo
Heano mamwe eemail yekusimbisa uye ehutsanana masevhisi ayo yakanga isina zvese zvekuvimbika zviratidzo yemakambani ari pamusoro.
Ampliz - Ampliz inosimbisa vatengi vako email kero mune chaiyo-nguva uye inokubatsira iwe kuchengetedza email utsanana kuendesa yakanyanya kupindura mwero. Iri dura rakanyoreswawo kune Bounceless service. Bounceless ichachenesa tsamba dzako dzeemail nekutsvaga maemail asina kuvimbiswa, zviteyeso zve spam, nenzvimbo dzinoraswa.
Antideo - Email Validation API sevhisi yekudzima Inogona kuraswa / Yemazuva email maemail, spam maemail, nezvimwe, kuchengetedza zvinyorwa zvako zvakachena.
Bvisa Disposable Email Kero - Tsvaga uye bvisa kuraswa, imwe-nguva, kurasa, zvenguva pfupi email kero.
Yakawanda Bulk Email Validator - webhu application inogona kuona kana email kero iri yechokwadi kana kunyepa. Chero ani anotumira maemail nguva dzose anogona kubatsirwa nekushandisa sisitimu.
CaptainVhenekera - tarisa & chenesa tsamba dzako dzekutumira nekukurumidza. Dhonza uye udonhedze yako faira mune yedu chishandiso uye isu tinoita iyo yakasara. Yakapusa, inokurumidza uye yakachengeteka.
RakachenaTheList.com - kuchenesa nekusimbisa maemail.
BataOut - Tsvaga chero email email kero pamwe nenhamba yefoni
DataValidation - Simbisa yako email chinyorwa nekukurumidza. Batanidza iyo MailChimp kana Yakajairika Kero account yekuenderera ichiongorora uye rondedzero yekuchengetedza.
Emailmarker - Emailmarker inobatsira iwe kusefa yakaderera-mhando maemail kubva kumusoro-kukosha manhamba. Isu tinoona kuti iwe unongotumira email kune chaivo vashandisi uye chengetedza mukurumbira wako, Simbisa yako email mushandirapamwe, uye chengetedza mari ne Emailmarker.
eHygienics inyanzvi email yekuongorora kambani. Vanobvisa mabhureki, kutyisidzira, varatidziri, vatongi, uye dzimwe njodzi dzese dzinoonekwa kubva kune vanonyorera dhatabhesi. eHygienics inopa chaiyo-nguva API mapuratifomu ayo anoshandiswa zuva nezuva nevanyori pasi rese.
Email Mhinduro - chengetedza email rondedzero yekuchenesa uye yekusimbisa sevhisi iyo ichakwenya, kuchenesa, kusimbisa, uye kuongorora yako iripo email kero dhatabhesi.
EmailHippo - Email yekusimbisa pamhepo sevhisi yevashambadzi vehunyanzvi uye vatengi vavo
EmailInspector - Chenesa uye bvisa zvisiri zveemail kero kubva kune ako ezvinyorwa zvinyorwa
Email Chinyorwa Tarisa - Email rondedzero yakasimbiswa inokudzivirira kubva pazvirango nekupa yakawandisa mhinduro yekusimbisa yeemail pamusika, kuve nechokwadi chekuti yako email zvinyorwa hazvina bounce-zvisina, zvinoshanda, uye zvinounza yakakwira ROI.
Email YoYo - Nyanzvi yeemail yekusimbisa rondedzero yekuchenesa mhinduro.
Email Validator - NeByteplant Yechokwadi-Nguva Yepamhepo Email Validator iwe unogona kuona zviri nyore kana email kero iripo uye iri kushanda.
Klemail - Klemail inokutendera kuti utarise kuti maemail aunotumira aripo. Chengetedza zita renzvimbo yako uye wedzera yako yakavhurika rate.
ListWise - Isu takaongorora mhedzisiro yemazana emamirioni emaemaresi eemail atakachenesa kugadzira email nyowani-yekuchenesa injini ine simba kudarika nakare kose. Edza RondedzeroWise II yemahara uye tora yako email kushambadzira kuita kune nyowani dzakakwirira
Bhokisi retsambaValidator - inobatanidza kune mail server uye inotarisa kana bhokisi retsamba riripo kana kuti kwete
Mailcheck - inogonesa maemail uye nhare vachishandisa masocial network
Mastersoft Boka - yakanangana nedata reAustralia
Kurumidza Kuongorora Email - Iyo webhu-based sevhisi yekuona email kero mune yakawanda kana chaiyo-nguva uchishandisa REST API. Ivo vanoona zvisiri izvo uye zvisiri-kushanda maemail uye vanokupa iwe yakazara yakazara yakazara mushumo.
SiftLogic - Email Verification & Scoring kubatsira inbox kuiswa uye kuwedzera mukurumbira wekutumira.
Snovio - Cold outreach automation - tsvaga, simbisa, uye email tarisiro neSnovio kuitira nani shanduko mitengo.
Truemail - Email Verification. Nyore, Kurumidza & Yakachipa. Chenesa tsamba yako yekutumira uye wedzera yako yekuendesa mwero unosvika kusvika 99%. Iyo email kero yekusimbisa maitiro yakanga isina kumbobvira yave nyore zvakadaro.
Verifalia - Verifalia ndeye web-based email yekusimbisa sevhisi iyo inokutendera iwe kurodha uye kusimbisa runyorwa rweemail kero zviri nyore uye nyore.
kuburitsa: Isu hatitore chero mutoro wekubudirira kwako mukusarudza mumwe weava vanopa, isu tanga tichida kupa runyorwa ruzere nevamwe vanovimba netariro. Tiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo mukati meichi chinyorwa.
Tags: Chiito-OnAnoshanda CampaignactivetrailaeroleadsAgile-CrmAiva-LabsamplizautopilotAWeberBombBombdaukabouncelessBriteVandudzaBrontoCampaign MonitorcaptainverifyCheckmarketrondedzero yakachenachenesa runyorwaCleverreachClickFunnelsCognito-MafomuConstant ContactkuonanaShanduriKitcuratedkusimbiswa kwedataDataValidationDEAkuburitswaDisposable email keroDisposable email kero kuonadonhaeHygienicschikero chetsamba yemumhepoemail kero hutsananaemail mhinduroemail yekutarisaemail yekuchenesa apiemail kuburitswaemail mvuuemail utsananaemail chinyorwa ratidzaemail kusimbiswaemail inoshandaongororo yeemailemail sosi apiemail yoyomailhippokunyanyanyanzviFormdeskFomuFreshAddressFulcrumGDPRGetsitecontrolGoogle-MafomuHighrisehubspothubucoiContactIcontact-Prozvine hungwaruinbox kuiswaInsightlyInstapageIntercomispJotFormjunk emailjunk email kusefaKickboxKickofflabsklemailrongedza kuchenesarongedza kuchenesaronga hutsananamailcheckermailchimpMailerlitemailjetTsambamarketoMoosendNocrmiomapepaPowrproofywdc.ioqasQualarookukurumidza email ongororoKurumidzaKutumira-DomboRFC 1035RFC 1123RFC 2822RFC 5321RFC 5322RFC 6531mutengesi pardotsender mukurumbiraSendgridSendpulseSendxsharpspringSmartemailingSmartsurveySmoovespamspam musungospam musungo email keroSparkPostchairoOngororo-Chero nzvimbozvenguva pfupi email kerothecheckertowertruemailmhandounbouncesimbisa email zvinyorwaverifaliachengetedza emailvertical mhindurovertical kupindurachiratidzo6WooboxwufooxverifyzapierzendeskZoho CRMZoho Mafomu
Kurekodha iMovie neWebhu Kamera uye Microphone Yakasiyana
Apr 25, 2014 pa 10: 49 AM
Kuongorora kukuru, Doug. Izvo zvakakosha kuti uzive, zvakadaro, izvo
kunzvenga uye kukunda email kuendesa matambudziko kunoda kuzere
email utsanana, kururamisa, uye basa rekusimbisa zvinopesana nekungoti "pinging"
(kureva SMTP macheki) ayo mazhinji evatengesi pane ako runyorwa anopa. Cheki che SMTP chinongopa ruzivo pane
kunyangwe email kero inotakurika pane imwe nguva nekururama kwe
mhedzisiro iyi ichiri kusiya zvakawanda zvekushuvira sezvo maIPs mazhinji achiita chero zvavanogona
kuodza moyo uyu muitiro. Zvakare, mabhonasi haazi iwo marwa eemail
vatengesi sezvo angangoita ese makambani anodonha mushe pazasi peye bounce zvivharo zvinobvumidzwa
Nyaya hombe dzakatarisana
email vashambadziri vanoguma nedambudziko reemail kero (eg spam misungo, honeypots,
vanorema spam vanyunyuti, kero dzakaipa, nezvimwewo) mumafaira avo pamwe nekusaziva
hutsanana zvikanganiso sezvo aya anonunurwa kero ari iwo ayo Spamhaus uye
mamwe masangano e-spam-kusefa anoshandisa kuburitsa ma spammers uye nekukurumidza uye
Kuti ugare kure neradar yeiyo
spam-kusefa masangano uye nekudaro nekukwirisa kugona kwako uye
mari, mumwe anofanirwa kushanda nehutsanana hweemail, kururamisa, uye kusimbisa
1) Bvisa zvinonetsa
adhiresi kubva pakupinda mudhatabhesi rako uye suka iwo ane
2) Ruramisa typos uye
zvimwe zvikanganiso zvehutsanana seSpamhaus zvachinja mazhinji eanowanzoitwa typoed
adhiresi mu spamtraps
3) Simbisa iyo
kuburitswa kweye email kero nekutarisa kusinga tsanangurike neemail-
chiitiko (semuenzaniso, kuvhura, kudzvanya, kubhowa, zvichemo zve spam, nezvimwewo), nhoroondo
archive yeMX uye SMTP macheki, uye chaiyo-nguva SMTP macheki.
Mariro yebasa riri pamusoro
inotanga peni parimwe kero yeemail uye inodonha zvakanyanya nevhoriyamu
inowedzera. Uyezve, dzivisa chero
mupi webasa uyo basa rake risingawanikwe mune chaiyo-nguva, otomatiki batch
(kureva 24x7x365), uye yakazara sevhisi batch maitiro, ayo anosanganisira manyoro
Kana iwe uri kutsvaga kuverengera
yako email kushambadzira kuedza kunozadzisa akanakisa ROI aine mashoma e
mutengo, kunetsekana, uye njodzi, kudyidzana nekambani yehutsanana yeemail kunoratidza
kuve yakanakisa diki investimenti iwe yaungamboita.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve 25% ye
makambani eFortune 100 pamwe nezviuru zvevashambadzi, zvikuru nezvidiki, ndizvo
kuchengeta yavo email dhatabhesi nyowani uye up-to-date, maona http://www.freshaddress.com/services/email-validation/
Gumiguru 8, 2014 pa 2:32 AM
Mhoro Doug uye billkaplan,
Iwe unogona zvakare kuona http://www.mailboxvalidator.com yeiyo email rondedzero yekuchenesa sevhisi.
Mar 20, 2015 pa 11: 55 PM
Webbula.com imwe kambani yekutarisa. Ivo vanopa hutsanana uye kuongorora
Mar 22, 2015 pa 3: 35 PM
Wakawedzera, ndatenda Scotty!
Apr 23, 2015 pa 4: 46 PM
Kutenda iwo matipi, kana paine munhu anoda kudzidza zvakawanda pakutenga kana kuchenesa yavo yekutengesa email database, tarisa iri gwara. http://bit.ly/1Ka27Hh
Jul 26, 2015 na8: 19 PM
Wakamboedza here? http://www.bulkemailchecker.com ? Ndakaedza mashoma masevhisi kubva pane yako runyorwa uye mushure mekuve mushoma pane kugutsikana pamwe nezvakabuda kana mutengo, ndakaenderera mberi nekutsvaga kwangu ndikawana Bulk Email Checker. Ini zvechokwadi ndinogona kuti kutsvaga kwangu kwemhando yepamusoro yakaderera mutengo email yekusimbisa sevhisi yapera. Ndanga ndichivashandisa kwemwedzi mina yapfuura uye ndaisakwanisa kufara. Vatarise kunze uye netariro iwe unogona kumisa kutsvaga kwako futi!
Kutenda Doug, iva nevhiki yakanaka!
Jul 27, 2015 na12: 59 PM
Zviri pane zvakanyorwa!
Sep 23, 2015 na3: 34 PM
Ndiri parizvino ndiri munzira yekutsvaga kambani kuti ndiongorore runyorwa rwangu uye ndaida kuziva kuti sei wanga usina kugutsikana nevamwe vevamwe vanopa? Ini ndiri mutsva kune izvi uye zvinotyisa kupfuura nemazhinji mawebhusaiti kuti uone kuti chii chinovaita vakasiyana. Saka kana iwe uchigona kugovana nei iwe usina kugutsikana nevamwe uye nei urikusarudza Bulk Email Checker pamusoro pedzimwe nzvimbo dzese. Izvi zvichandibatsira uye pamwe vazhinji vevamwe vanoverenga izvi. Ini ndinoona kuti mitengo iri nani paBulk Email Checker asi ndinodawo kuziva zvimwe zvinhu izvo zvingangoita zviri nani. Ndatenda pamberi pekupindura.
Sep 24, 2015 na4: 17 PM
Hi Simone, pane zvatova nenjodzi dzakabatana nekushandisa zvinyorwa zvekare kana zvinyorwa zvekutenga. Email vanopa sevhisi, kune chikamu chikuru, vanozvidza chero kambani inounza maemail adhi asina kuongororwa. Uye Vashandi veInternet Service vanogamuchira iyo email vanozoshandura zvachose email yako kana kutovharidzira mupi wako kana mazhinji emaemail adhiresi achirova kana kuzivisa email seSSPAM. Nekuda kweizvozvo, kushandisa runyorwa rwekuongorora chishandiso kwakakosha kana uchimonera mumameresi eemail eakakodzera email kero. Kana iwe ukashandisa chishandiso chisiri icho, unozvipinza panjodzi iwe uchivharirwa neIP uye uchidzingwa kubva kune yavo email sevhisi webasa.
Sep 1, 2015 na11: 27 PM
Ndatenda nechinyorwa !! Ndine mubvunzo. Ini ndoda kutanga yangu yega email yekuchenesa sevhisi. Unogona here kukurudzira chero yakanaka software yekutenga. Ndakatarisa ndisina rombo kusvika ikozvino. Ndinoda kuti zviitwe sezvinobvira. waita hako
Sep 2, 2015 pa 10: 40 AM
Hi Josh, ini handizive chero off-ruoko, asi pamwe rimwe remasevhisi akanyorwa pano ane API kana rinopa White Label mhinduro. Izvi zvinokutendera kuti utore mhinduro yacho seyako.
Sep 16, 2015 pa 3: 26 AM
Nyore nzira yekutarisa dhatabhesi kero kero, Iyo yakanyanya yepamusoro email yekutarisa. Uchapupu.io.
Tiri mukuedzwa kwe beta izvozvi asi isu tine nzira yakatwasuka yekuyedza.
Tinoda mhinduro. Unogona kuwana kupa imwe chiyero kuyedza sevhisi.
Sep 17, 2015 na1: 20 PM
Tiudze kana iwe wabuda mubeta uye isu tinokuwedzera iwe kune runyorwa rwevanopa!
Gumiguru 13, 2015 na2: 35 PM
Ini ndangoenda kune yako saiti kunoedza masevhisi ako zvakadaro - hapana nhamba yefoni. Hazvigoneki kuti chero munhu angoisa runyorwa rwevanonyoresa kune yako saiti pasina kubata base neakaundi maneja kana mumwe munhu kuti asimbise kuti ini handisi kungopa vandinyoreri kunzvimbo isingazivikanwe.
Gumiguru 13, 2015 na4: 58 PM
Kana iwe ukabaya pane Inowanikwa neNeverbounce, iwe uchaona yavo nhamba yefoni pane yavo yekufambisa bhawa.
Nov 5, 2015 pa7: 27AM
Hei Douglas. Ndiri kushamisika kuti hauna kutaura Verifalia mune yako runyorwa. Kwete chete inoratidzika seimwe yeakanyanya kusimbisa emaimeri vanopa muEurope asi zvakare vanopa zvakasarudzika maficha andisina kuona chero kumwe kunhu, kusanganisira rutsigiro rweemail kero ayo asingashandise chiLatin alfabhethi (isu tine vatengi vazhinji mune edu zvinyorwa kubva Singapore, Japan neSaudi Arabia, semuenzaniso), uye kugona kuita zvakadzama kusimbiswa kunotora akawanda mapasuru, kusimbisa email kero ine zvenguva pfupi nyaya senge bhokisi retsamba pamusoro pequota kana greylisting. Uyu mupi anofumura RESTful email yekusimbisa API yea software vanogadzira uye maraibhurari emitauro mikuru yekugadzira uye mapuratifomu… Uye ivo vane chirongwa cheMahara chinouya pamwe nekusvikira kuemaimeti emahara mazana masere pazuva.
Mbudzi 5, 2015 na7: 07 PM
Kutenda - isu takawedzera Verifalia kune iyo chinyorwa!
Mbudzi 25, 2015 na4: 56 PM
uye ndatenda neichi positi 🙂
Mar 15, 2016 pa 4: 43 PM
Ini ndashandisa zvimwe zvekurudziro mune ino blog kusarudza email runyorwa rwekuongorora sevhisi. Ini ndakapedzisira ndaenda neemaillistverify.com, uye pandakanga ndichifara navo pane yangu yekutanga runyorwa, runyorwa rwese rwakatevera rwandakaedza kumhanyisa pabasa ravo rwave nedambudziko, kunyanya mukuti ini handikwanise kurodha rondedzero yevakachena maemail mumashure. Ndeipi poindi yekushandisa sevhisi yavo kana ndikatadza kutsvaga kuti ndeapi maemail kero ari kushanda? Kunze kweizvozvo, rutsigiro rwavo harwuna kunyatsoteerera uye ivo havana kubatikana nekuchengetedza vatengi.
Mar 15, 2016 pa 5: 55 PM
Takave nerombo rakanaka neNeverbounce… zvakanyanya zvekuti takabatana navo.
Apr 23, 2016 pa 7: 41 AM
ini ndinoda yemahara sevhisi kana software…. inombovapo here?!
Apr 23, 2016 pa 8: 44 PM
Apr 25, 2016 pa 7: 34 AM
Great post! Ini ndanga ndichingoshamisika kana ndichigona kusanganisa sevhisi yakadai neGetResponse?
Apr 25, 2016 pa 7: 01 PM
Andrea, ndinotenda kudaro. Ini ndinofunga nzira yekuzviita ndeyekuti fomu rako rishande neAPI yekambani yekusimbisa. Kana iyo email yangodzoserwa seyakavimbiswa, ipapo unogona kuisundira kuGetResponse.
Jul 9, 2016 pa 1: 21 AM
Ndiri kushandisa izvozvi https://www.emailverifierapi.com/ kuongorora maemail email mune yakawandisa 500 email email yekushambadzira kunyorera. Ini handina zvichemo sezvo mhando yebasa iri yakakwana, zvisinei isu tiri kutsvaga yakaderera mutengo imwe nzira iyo inopa yakafanana mhando. Unogona here kuratidza rimwe bhizinesi giredhi api iro rinogona kushandiswa? "Enterprise giredhi" riri iro rakakosha izwi. Ndinokutendai nerubatsiro rwenyu!
Jul 12, 2016 na5: 58 PM
Ndinovimba, uri kuita mushe, kungo gadziridza iwe, Tiri kumhanya neyedu email yekusimbisa maitiro.
kwausingade kutambisa mari yako yakawanda. Ini ndichave ndinopfuura kufara kupindura iwe nezve maitiro edu Mashandiro atinoita chaizvo.
Tiri kutora rondedzero kubva kune vatengi vanoda kuongorora maemail, isu takazodaidza mushandi wekugamuchira kana General Manager wekambani isu tobva tangotora maAmaimeri avo Anoshanda,
nekuita izvi nenzira mushure memazuva gumi nemashanu tinozvitarisa needu email ongororo maitiro isu tinoita Eblast.
Kana chero paine chero kuvhiringidzika kana mubvunzo pane izvi zvine chekuita nemitengo
Inzwa wakasununguka kutitumira isu tinodzoka kwauri nekukurumidza sezvazvinogona
Gumiguru 25, 2016 pa 8:26 AM
Ndatenda nechinyorwa! Ndanga ndichishandisa proofy.io uye ndakagutsikana nazvo. Mutengo wakangwara hauna kudhura kune vamwe uye kusvika padhuze nemhando uye mhanyisa.
Gumiguru 25, 2016 pa 8:47 AM
maita basa kwazvo Proofy.io
Dec 2, 2016 pa 4: 37 AM
Proofy.io ikambani yekunyepedzera. Basa racho harishande. Ndabhadhara macheki zana, ndakasimudza zvinyorwa zvangu zvina mazana mana zvemaimeri uye zvave “Kugadziriswa” kwemazuva maviri apfuura .. Rubatsiro rwePamoyo pane ino saiti neruzivo rwese nezvesaiti yandawana online, kuburikidza neGoogle inogara ichibva kumurume anonzi Roman (uyo angangodaro ari muridzi wenzvimbo iyi) uye shamwari yake Anna. Handina kuwana imwe ongororo yakavimbika uye ndaisafanirwa kuvapa mari sezvo ivo vakanyarara zvino. Vakataura chimwe chinhu nezve "programmer anoshanda pane server izvozvi" asi kubva ipapo - hapana kutaurirana uye pasina mari kumashure. Usashandise proofy.io !!!
Zvita 20, 2016 na10: 00 PM
Ndatenda nemazano! mazano anotyisa.
Jan 9, 2017 pa 5: 58 AM
Tiri kutsvaga kambani inogona kupa gwaro rakabvumidzwa zviri pamutemo nezvekuti e-mail kero dzakasimbiswa dzinoshanda uye dzinoongororwa.
Iwe unoziva chero kambani yakadai?
Jan 9, 2017 pa 11: 30 AM
Handina chokwadi chekuti chero munhu anogona kupa humbowo hwepamutemo nekuti vanhu vanorega kushandisa maemail uye vanochinja email kero zuva rega rega. Pakunakira ipuratifomu iyo inoedza kutora email kero shanduko uye yako runyorwa inogona kukwikwidzwa kupokana neizvozvo.
Ndira 11, 2017 na11: 07 PM
"Zvinoshamisa, mumaonero angu, ndezvekuti ndinotenda kuti zviri nyore kuti MUPAMBI atumire email mubhokisi rako rekunyora pane iyo kambani inotumira meseji chaiyo."
Iwe unogona kunge uri pachokwadi pane izvi, asi ndezvekuti kazhinji mabhizinesi haashandise kushambadzira email nenzira kwayo, kana kazhinji zvakakwana kuti zvinyorwa zvavo zviwedzere kushandiswa uye kuti ivo vadzidze maitiro akanakisa. Ivo (munhu wese) vanofanirwa kutumira email kakawanda.
Asi nezve runyorwa rwezvishandiso… zvinotyisa!
Ndira 11, 2017 na11: 09 PM
Tichatevera ichi chinyorwa kumusoro nehurukuro huru yepodcast pamwe ne CEO we Neverbounce, Oscar. Ramba wakatarwa!
Jan 20, 2017 pa 3: 20 AM
Ini ndinofunga hapana nzira yekuongorora email yako kana yako acc yagadzirwa. Saka ndinofungidzira iwe unofanirwa kuita izvi paunogadzira yako acc mudanho rekutanga.
Mar 28, 2017 pa 11: 55 AM
Chinyorwa chakanyanya. Ndingazive here kana iwe wakamhanya iyo Webinar neiye CEO we Neverbounce, Oscar?
Apr 24, 2017 pa 4: 47 PM
Ndiri kutsvaga ruzivo maererano nekusimbisa maemail kero mune chaiyo-nguva sezvo mutengi mutsva achiuya kukambani yangu. Iyo software / tekinoroji inowanikwa kuti ndiwedzere mune yedu yazvino software? Kana isu tingazoda here kuchinja pamusoro pese software yedu yazvino? Zvakanakisa isu tine dambudziko rekuti timu yedu ichitaipa mumakero e-email evatengi zvisirizvo kana mutengi achidaro futi. Ndinoda kuimisa panguva yekutenga pachinzvimbo chekuti runyorwa rucheneswe isu tichingobata kero yakaipa yeemail pane kuti tisvike mutengi wedu.
Aug 29, 2017 na12: 24 PM
kana iwe uchitarisa ku real-time email ongororo, taura nevakomana paemailchecker.com, ini ndine ruoko rwekutanga ruzivo mukushandisa yavo chaiyo-nguva mhinduro uye yayo yakakura uye yakarurama!
Jun 27, 2017 pa 10: 36 PM
Mhoro Douglas, Muunganidzwa wakanaka ipapo. Ndiri kunzwa sekunge warasikirwa nemutambi muhombe - http://www.emailverifierapp.com Ndokumbira utarise. Ndatenda
Aug 29, 2017 na12: 22 PM
Chinyorwa chikuru Doug anodzidzisa kwazvo uye mamwe makomendi makuru, Tinomhanya inotungamira gen kambani uye tine akawanda anosvina mapeji pawebhu yevatengi uye tinounganidza zviuru zvishoma emaimeri pazuva! isu takashandisa makambani mashoma asi takaguma tadzokera kukambani yedu yekutanga yatakaedza nayo (kambani inonzi Email Checker) sekuwana kwavo software yavo kuti ive yechokwadi uye yakavimbika. Isu tinoshandisa API yavo pamapeji edu ekumanikidza uye chishandiso chikuru kwatiri uye chakakurumbira nevatengi vedu, ivo vanopa verification yakawanda pamwe neyatinoshandisa fomu fomu nguva nenguva asi isu tinoshandisa API yavo zuva nezuva nemhedzisiro huru. Zvisinei hazvo ndanga ndichida kugovana ruzivo rwangu sezvo ndichiziva kuti kune makwikwi mazhinji kunze uko, ipa vakomana paemailchecker kudanidzira webhusaiti yavo http://www.emailchecker.com uye uvaudze kuti John Morgan akutuma 🙂
Gumiguru 15, 2017 na4: 14 PM
Ndinofara iwe wataura musiyano uripo pakati pechokwadi nekusimbiswa. Tinogona here kuwedzera emailchecker.com kune iyo chinyorwa?
Gumiguru 27, 2017 pa 9:39 AM
Gumiguru 28, 2018 na12: 53 PM
Hechino chimwe chishandiso chinoshanda chandinoda kuratidza: https://debounce.io
Unogona here kuwedzera izvi pane yako runyorwa?
Dec 10, 2018 pa 7: 59 AM
Takawedzera DeBounce, ndatenda!
Kukadzi 3, 2019 na12: 00 PM
Unoda kuratidza imwezve yeapp yekuongorora email - https://mailcheck.co
Ivo vanowedzera kuendesa kumagariro profiles akabatanidzwa kune tsamba, zvishoma pane yakananga smtp cheki. Iyo inobvumidza kuwana rumwe ruzivo uye kuona ndeye email muridzi anoshanda mu gravatar, gmail, nezvimwe.
Kukadzi 5, 2019 na6: 56 PM
Aug 6, 2019 pa 10: 18 AM
Ini ndinogona here kuwedzera chimwezve chikuru chishandiso pane ino chinyorwa?
TrueMail (https://truemail.io/) chishandiso chikuru chekusimbisa email.
Izvo chaizvo chaizvo uye zviri nyore mukushandisa. Ichakurumidza kuchenesa runyorwa rwako kubva kune zvisiri izvo uye zvine ngozi email kero.
Nenzira, ine chiuru chemaimeri chekusimbiswa kwemahara mwedzi wega.
Aug 6, 2019 na1: 07 PM
Thanks Alona! Ndakavawedzera kune rumwe runyorwa sezvavanenge vachihwanda nyika yavo yekwavanobva uye vane avois dhata yakaiswa kune yakavanzika.
May 24, 2020 pa 5: 50 PM
Iwe unogona zvakare kuongorora maemail neiyi yemahara yekusimbisa sevhisi: https://www.emailverified.org
Nov 14, 2020 pa5: 06AM
Mhoro Doug, inonakidza nzira yawachengeta nayo chinyorwa ichi kuvandudzwa mumakore mashoma apfuura nevatsigiri vevatsva, ndinorumbidza kuedza. Ndingafarire zano Antideo kuti iwedzerwe pane iyo rondedzero, ndeimwe yemasevhisi anodhura kunze uko. Iyo yemahara tier iyo inopa inopfuura 5000 yekusimbisa cheki pamwedzi inodarika yakaringana kune bhizinesi diki, saka ungafarire kwazvo kana iwe ukakwanisa kutarisa sevhisi (www.antideo.com) uye utisanganise mune yako runyorwa kana iwe ukaona kukodzera.
Mbudzi 18, 2020 na4: 41 PM
Ndatenda, ndawedzera kune iyo chinyorwa Rimwe divi katsamba, zvinoita senge yako kambani yemubereki iri pasi.